ဒီလိုအမှားပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ဆံပင်လေမှုတ်နေတာတွေရပ်လိုက်ပါတော့ !!! - For her Myanmar
ဒီလိုအမှားပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ဆံပင်လေမှုတ်နေတာတွေရပ်လိုက်ပါတော့ !!!
မြင်ယောင်နေတယ် ဒါတွေဆက်လုပ်သွားရင်တော့ ကတုံးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ…
ဆံပင်ကို အုံထူထူသန်သန်နဲ့ အရှည်ထားချင်လိုက်တာလည်း ယောင်းတို့အပြင်နှစ်ယောက်မရှိဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း သေချာဂရုစိုက်လားဆိုတော့လည်း နိုးပဲမဟုတ်လား။ ခုလည်းကြည့် နှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက် လျှော်ပြီး လေမှုတ်တာတောင် သေချာမှန်အောင် မှုတ်ကြရဲ့လားမသိဘူးနော်။ (သူများတွေကိုသာပြောနေတာ ကိုယ်လည်း သိပ်မထူးခြားနားပါပဲ :P) ဆိုတော့ လေမှုတ်တဲ့အခါ မှားတတ်တဲ့ (မှားနေကြတဲ့) အမှားလေးတွေကို ဂရုစိုက်ကြရန်အလို့ငှာ ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုထက်ပိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်မိနေရင်တော့ အမြန်ဆုံးပြန်ပြင်ဖို့လိုမယ်နော်။
ရေချိုးခန်းထဲက ရေချိုးခေါင်းလျှော်ပြီးထွက်လာတာနဲ့ တဝူးဝူးနဲ့လေမှုတ်နေတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်လိုက်ပါတော့နော်။ ဆံပင်အဖျားတွေ နှစ်ခွဖြစ်ပြီး အပိုင်းပိုင်းပြတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေတွေတတောက်တောက် ကျနေတဲ့အချိန်မှာ လေတန်းမမှုတ်ဘဲ ဆံပင်ကိုပုဝါလေးနဲ့ထုတ်ထားပြီး အရင်ဆုံးရေတွေစုပ်ပါစေ။ မိတ်ကပ်လိမ်းဘာညာ လုပ်ပြီးတော့မှ ပုဝါကိုဖြည်ချပြီး ဆံပင်နည်းနည်းပါးပါး ဖွသုတ်၊ အားလုံးပြီးသွားတော့မှ လေမှုတ်ရင် ဆံပင်အထိနာတာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
အဲ့မှာ ဆံပင်တွေဆိုတာ အထွေးလိုက် အားကြီးနဲ့ကို ကျွတ်မှာ ပူမနေနဲ့။ 😛 ဦးရေပြားဆိုတာ ခေါင်းလျှော်ရည်တိုက်ရိုက်ထိရင်တောင် ဆံသားအမြစ်တွေက သိပ်မခိုင်ချင်ဖြစ်နေတာ အဲ့အပူကြီးနဲ့လည်းထိရော အဟင်းဟင်းတွေဖြစ်ကုန်ရော။ ဦးရေပြားတင်မကဘူး ဆံပင်နဲ့အရမ်းနီးရင်တောင် ဆံပင်အရမ်းဖွာထွက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ လေမှုတ်ရင် ခေါင်းနဲ့ နည်းနည်းခွာပြီး မှုတ်ကြပါလို့။
Related Article >>> ဆံပင်ခွဲကြောင်းတွေကို မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ?
(၃) ဆံသားကိုအလွှာမခွဲဘဲ လေမှုတ်တယ်။
ဒါကတော့ နှင်းကိုယ်တိုင်လည်း ပြင်ရမယ့်အချက်ပါ။ များသောအားဖြင့် လေမှုတ်တဲ့အခါ အလွှာမခွဲတော့ ဒီအတိုင်းအပေါ်ကိုပဲ မှုတ်သွားရော။ အလောသုံးဆယ်နဲ့ဆိုတော့ အောက်ဘက်ကဆံပင်တွေ မခြောက်သေးတာကိုလည်း သတိမထားမိ၊ အပြင်လည်းထွက်ရော ဆံပင်ကစိုစိုစိစိနဲ့ ပုံမကျပန်းမကျတွေဖြစ်ရော။ (နှင်းတို့လိုဆံပင်ဂုတ်ထောက်နေတဲ့ လူတွေဆိုပိုသိသာတယ်။ ပုံမကျတော့ ဆံပင်ကလန်လန်ကြီးဖြစ်နေရောလေ။) အမြဲတမ်းဆံပင်လေမှုတ်တဲ့အခါ အပေါ်ဘက်နဲ့ အောက်ဘက်ကိုအလွှာတွေခွဲပြီး မှုတ်ပါ။
လေမှုတ်ပြီးတဲ့အချိန် ခေါင်းလိမ်းဆီမလိမ်းတာက ဆံသားတွေပျက်စီးဖို့အတွက် အားပေးနေသလိုပါပဲ။ ဦးရေပြားမှာရှိတဲ့ အဆီတွေအားလုံးကို စုပ်ထုပ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာမို့ လေမှုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ဗီတာမင် E ပါတဲ့ခေါင်းလိမ်းဆီကို ပြန်လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်နော်။ ဒါမှ ဆံပင်အရမ်းမပျက်စီးတော့မှာ။
Related Article >>> နာရီပိုင်းအတွင်း ဆံပင်ရှည်သွားအောင်…
ခရီးသွားတုန်း ဟော်တယ်ကရတဲ့ ပလတ်စတစ်ဘီးလေးတွေပဲသုံးနေတာတွေ ရပ်လိုက်ပါ။ ဘီးတစ်ချောင်းမှာ အနည်းဆုံး အလေးချိန်တော့ရှိရပါမယ်။ နောက်ပြီး သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဘီးတွေကလည်း အပူကူးလွယ်ပြီး ဆံပင်အပူလောင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လေမှုတ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတည်းဆံပင်ပုံသွင်းရမှာမို့ ဘီးလိပ်သုံးရမယ့်နေရာမှာ ရိုးရိုးဘီးအပြားပဲသုံးရင် ကိုယ့်ဆံပင်က ပုံပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဆံပင်အနေအထားကိုကြည့်ပြီး ဘီးကိုသေချာရွေးသုံးပါ။
ယောင်းတို့ရေ ဆံပင်ကနှင်းတို့ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပါနော်။ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ဆံပင်ကျွတ်လာမှ? ပျက်စီးလာတော့မှ ဘာလို့လဲဆိုပြီး အဖြေရှာနေတာထက် ဒီလိုလေမှုတ်တဲ့အခြေခံလေးကနေစပြီး ထိန်းသိမ်းသွားရင်တော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ထွေထွေထူးထူးလည်း ပြောင်းစရာမလိုဘူးလေနော့်။
မွငျယောငျနတေယျ ဒါတှဆေကျလုပျသှားရငျတော့ ကတုံးဖွဈတော့မယျဆိုတာ…
ဆံပငျကို အုံထူထူသနျသနျနဲ့ အရှညျထားခငျြလိုကျတာလညျး ယောငျးတို့အပွငျနှဈယောကျမရှိဘူးနျော။ ဒါပမေဲ့တကယျတမျး သခြောဂရုစိုကျလားဆိုတော့လညျး နိုးပဲမဟုတျလား။ ခုလညျးကွညျ့ နှဈရကျခွားတဈခါလောကျ လြှျောပွီး လမှေုတျတာတောငျ သခြောမှနျအောငျ မှုတျကွရဲ့လားမသိဘူးနျော။ (သူမြားတှကေိုသာပွောနတော ကိုယျလညျး သိပျမထူးခွားနားပါပဲ :P) ဆိုတော့ လမှေုတျတဲ့အခါ မှားတတျတဲ့ (မှားနကွေတဲ့) အမှားလေးတှကေို ဂရုစိုကျကွရနျအလို့ငှာ ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာရေးပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီအခကျြတှထေဲက တဈခုကိုဖွဈဖွဈ၊ တဈခုထကျပိုတာပဲဖွဈဖွဈ လုပျမိနရေငျတော့ အမွနျဆုံးပွနျပွငျဖို့လိုမယျနျော။
ရခြေိုးခနျးထဲက ရခြေိုးခေါငျးလြှျောပွီးထှကျလာတာနဲ့ တဝူးဝူးနဲ့လမှေုတျနတောတှေ ရပျတနျးကရပျလိုကျပါတော့နျော။ ဆံပငျအဖြားတှေ နှဈခှဖွဈပွီး အပိုငျးပိုငျးပွတျတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရတှေတေတောကျတောကျ ကနြတေဲ့အခြိနျမှာ လတေနျးမမှုတျဘဲ ဆံပငျကိုပုဝါလေးနဲ့ထုတျထားပွီး အရငျဆုံးရတှေစေုပျပါစေ။ မိတျကပျလိမျးဘာညာ လုပျပွီးတော့မှ ပုဝါကိုဖွညျခပြွီး ဆံပငျနညျးနညျးပါးပါး ဖှသုတျ၊ အားလုံးပွီးသှားတော့မှ လမှေုတျရငျ ဆံပငျအထိနာတာ သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။
အဲ့မှာ ဆံပငျတှဆေိုတာ အထှေးလိုကျ အားကွီးနဲ့ကို ကြှတျမှာ ပူမနနေဲ့။ 😛 ဦးရပွေားဆိုတာ ခေါငျးလြှျောရညျတိုကျရိုကျထိရငျတောငျ ဆံသားအမွဈတှကေ သိပျမခိုငျခငျြဖွဈနတော အဲ့အပူကွီးနဲ့လညျးထိရော အဟငျးဟငျးတှဖွေဈကုနျရော။ ဦးရပွေားတငျမကဘူး ဆံပငျနဲ့အရမျးနီးရငျတောငျ ဆံပငျအရမျးဖှာထှကျတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျတာမို့ လမှေုတျရငျ ခေါငျးနဲ့ နညျးနညျးခှာပွီး မှုတျကွပါလို့။
Related Article >>> ဆံပငျခှဲကွောငျးတှကေို မကျြစိတဈမှိတျအတှငျး ဘယျလို ဖြောကျကွမလဲ?
(၃) ဆံသားကိုအလှာမခှဲဘဲ လမှေုတျတယျ။
ဒါကတော့ နှငျးကိုယျတိုငျလညျး ပွငျရမယျ့အခကျြပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ လမှေုတျတဲ့အခါ အလှာမခှဲတော့ ဒီအတိုငျးအပျေါကိုပဲ မှုတျသှားရော။ အလောသုံးဆယျနဲ့ဆိုတော့ အောကျဘကျကဆံပငျတှေ မခွောကျသေးတာကိုလညျး သတိမထားမိ၊ အပွငျလညျးထှကျရော ဆံပငျကစိုစိုစိစိနဲ့ ပုံမကပြနျးမကတြှဖွေဈရော။ (နှငျးတို့လိုဆံပငျဂုတျထောကျနတေဲ့ လူတှဆေိုပိုသိသာတယျ။ ပုံမကတြော့ ဆံပငျကလနျလနျကွီးဖွဈနရေောလေ။) အမွဲတမျးဆံပငျလမှေုတျတဲ့အခါ အပျေါဘကျနဲ့ အောကျဘကျကိုအလှာတှခှေဲပွီး မှုတျပါ။
လမှေုတျပွီးတဲ့အခြိနျ ခေါငျးလိမျးဆီမလိမျးတာက ဆံသားတှပေကျြစီးဖို့အတှကျ အားပေးနသေလိုပါပဲ။ ဦးရပွေားမှာရှိတဲ့ အဆီတှအေားလုံးကို စုပျထုပျလိုကျသလိုဖွဈသှားတာမို့ လမှေုတျပွီးသှားတဲ့အခါ ဗီတာမငျ E ပါတဲ့ခေါငျးလိမျးဆီကို ပွနျလိမျးပေးသငျ့ပါတယျနျော။ ဒါမှ ဆံပငျအရမျးမပကျြစီးတော့မှာ။
Related Article >>> နာရီပိုငျးအတှငျး ဆံပငျရှညျသှားအောငျ…
ခရီးသှားတုနျး ဟျောတယျကရတဲ့ ပလတျစတဈဘီးလေးတှပေဲသုံးနတောတှေ ရပျလိုကျပါ။ ဘီးတဈခြောငျးမှာ အနညျးဆုံး အလေးခြိနျတော့ရှိရပါမယျ။ နောကျပွီး သတ်တုနဲ့လုပျထားတဲ့ ဘီးတှကေလညျး အပူကူးလှယျပွီး ဆံပငျအပူလောငျတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ နောကျပွီး လမှေုတျတဲ့အခြိနျမှာ တဈခါတညျးဆံပငျပုံသှငျးရမှာမို့ ဘီးလိပျသုံးရမယျ့နရောမှာ ရိုးရိုးဘီးအပွားပဲသုံးရငျ ကိုယျ့ဆံပငျက ပုံပကျြသှားတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ဆံပငျအနအေထားကိုကွညျ့ပွီး ဘီးကိုသခြောရှေးသုံးပါ။
ယောငျးတို့ရေ ဆံပငျကနှငျးတို့ရဲ့ ဒုတိယမကျြနှာပါနျော။ အုံလိုကျကငျြးလိုကျ ဆံပငျကြှတျလာမှ? ပကျြစီးလာတော့မှ ဘာလို့လဲဆိုပွီး အဖွရှောနတောထကျ ဒီလိုလမှေုတျတဲ့အခွခေံလေးကနစေပွီး ထိနျးသိမျးသှားရငျတော့ ပိုပွီးအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ အရမျးပငျပငျပနျးပနျးနဲ့ ထှထှေထေူးထူးလညျး ပွောငျးစရာမလိုဘူးလနေေျာ့။
Tags: blow, damaged, drying, good, hair, Mistakes
၂၀၁၈ ရဲ့ ဆောင်းဦးပိုင်းမှာခေတ်စားလာဦးမယ့် အလှအပရေစီးကြောင်းအသစ် ၅ မျိုး
Hnin Ei Oo October 15, 2018